ठुलो Sinterklaas पदोन्नति: सुन्दर आश्चर्य सुन्दर प्याकेज! : मार्टिन Vrijland
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	30 नोभेम्बर 2019 मा	• 10 टिप्पणिहरु
यो लगभग Sinterklaas, एक वास्तविक बच्चाहरु पार्टी र आश्चर्य पार्टीहरु को एक पार्टी हो। यी आश्चर्यजनक सुविधाहरु प्याकेज गरीन्छ र प्राय: हामीलाई राम्रो भाग्य लाग्छ। हाम्रा बच्चाहरूको सन्दर्भमा, हामी यसको लागि भुक्तान गर्न पाउँदा खुसी छौं, तर सिन्टरक्लास राज्यको आश्चर्यकर्महरू राम्रा राम्रा प्यालाहरूमा मात्र राम्ररी प्याक गरिएको छ र हामीलाई भाग्य भन्दा बढी खर्च लाग्छ। मिथकहरूमा विश्वास गर्न हामीले एउटा सानो उमेरमा सिक्यौं र सिनर्टाक्लास समाचारहरू युवा कानमा चाँडै नै सहयोगीहरूको आविष्कार गरिएको कारवाहीको लागि प्रयोग गर्न थाल्छ।
म भन्छु 'Piet', किनकि Zwarte Piet छलफल तटस्थ भाषणको अग्रदूत हो जुन यूरोपीय स्तरमा आउँदैछ र त्यो भेदभावसँग जोडिनेछ। कालो बिरूद्ध भेदभाव मात्र होइन, तर LGBTI विरुद्ध पनि विभेद, जसमा hetero को H हुँदैन (त्यो H समलिose्गीको लागि खडा छ)। संक्षेप मा, Zwarte Piet छलफल भेदभाव कानून को लागु को वरिपरि घुमायो र स्टेडियम choirs समाज चलान भनेर कुन दिशामा संकेत पठायो: स्मार्ट क्यामेरा जुन मोनिटर गर्दछ वा तपाइँको बिरुद्ध भेदभाव गर्दछ। पहिले स्टेडियम भित्र; तर स्टेडियम बाहिर कति चाँडो हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ).
हामी द्रुत रूपमा कूल नियन्त्रण राज्यको लागि तयार भइरहेका छौं, जसद्वारा उक्त भाषणलाई पनि अनुगमन गरिनेछ। यदि तपाईं भविष्यमा सर वा महोदय हुनुहुन्छ वा शब्दहरू जनशक्तिको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं बोबिन हुनुहुन्छ र तपाईंले ठूलो सिन्टर्क्लास पुस्तकमा एक नकारात्मक नोट पाउनुहुनेछ, जसले सबैको आचरणको ट्र्याक राख्नेछ। यो अब छालाको र about्गको बारेमा मात्र हो। यो लि and्ग तटस्थ बोलीको परिचय को बारे मा र सबै भन्दा माथि छ। तर हामी सामान्यतया बिर्सन्छौं कि कानून वा मापन सिन्टरक्लास पत्रिका द्वारा A को रूपमा बेचिन्छ, तर बीमा पनि लागू हुन्छ।
यदि व्यवहार दृढताका साथ पार भयो भने, तपाइँले अबदेखि कुनै उपहार प्राप्त गर्नुहुने छैन र डट समाजको चिमनीलाई सफा गर्ने सफ्ट पोंचले तपाईलाई टाढा लैजानुहुनेछ जसले सबै थोकबाट टाढा राख्छ। सिन्टरक्लाससँग पक्कै पनि खोजी वारन्ट वा सरकारी वकीलको कागजको एक टुक्रा भित्र आउन अनुमति हुनुपर्दछ, तर भाग्यवस कथाकारले यस्तो कथाको आविष्कार गरेका छन जो बाह्य संसारबाट पूरै एक्लो जीवन बिताएको थियो र आफ्ना बच्चाहरूलाई यौन शोषण गरेको थियो, अस्ट्रियाका एक कवच भावनामा झुण्डियो। छतमा र फार्ममा सबै प्रकारका लुकेका कोठाहरू थिए जुन स्पष्टतः मेगा आकारको थियो! त्यो भूत परिवारमा, प्राइभल बुबा, स्पिरिट आकर्षणकर्ता, मिथक, अखबारको कथा, खोजी वारन्टको आवश्यकतालाई एकै पटक झुकियो। यसमा कुनै भाले बास्दैन। फेबेलजेकर्न्टले सबै चीज ल्याउन सक्दछ कि जस्तो यो संसारमा सब भन्दा सामान्य चीज हो।
तपाईंको अगाडिको ढोका अबदेखि पवित्र छैन। सिन्टरक्लास भर्खरै आफ्नो नोकरको साथ आउन सक्छन्।
भाग्यवस, सेन्ट निकोलस पवित्र देखिन्छन् र उनको आश्चर्यका चीजहरू सँधै राम्ररी प्याक गरिन्छन्। राम्रो बच्चाहरूले उसको नराम्रो पक्षबाट केही याद गर्दैनन्। कथाको त्यो अंश, जहाँ बच्चाहरूलाई सेन्टको झोलामा स्पेनमा लगिएको थियो, परम्पराको बारेमा छलफलमा हिमपात गरिएको छ, तर यो वास्तवमै सम्बन्धित छ।
अभिभावकले बच्चाहरूलाई बताउन धम्की प्रयोग गर्छन्: Gकृपया, अन्यथा तपाईं यस वर्ष Sinterklaas बाट कुनै चकलेट वा खेलौना प्राप्त गर्नुहुने छैन। त्यसैले यो वास्तवमा एकदम शैक्षिक पार्टी हो, कि Sinterklaas पार्टी। 'सिन्टरक्लासको झोला' को तत्व सबैको लागि हो जसले कहिलेकाँही निको निकोलसको दाह्रीमा तान्छ र यो नक्कली हो भन्छ। सिन्टरक्लासको झोलामा (केटाहरू केटाहरू के हाकिमहरू हुन्) को छेउछाउमा कानून द्वारा माफी (माफी र tacitly बाहिर धक्का बिना) भरिन्छ अनिवार्य GGZ प्रवेश। उक्त कानूनले रुइनरवोल्ड उपायको साथ (सोट वाइपरहरूले कुनै खोज वारन्टविना कुनै पनि घरमा आक्रमण गर्न सक्छ) भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ कि सिन्टरक्लास झोलामा असामान्य व्यवहार गर्ने मानिसहरूलाई स्पेनमा पठाउन सकिन्छ। त्यसो भए 'मनोरञ्जन क्लिनिक' संग 'स्पेन' लाई प्रतिस्थापन गर्नुहोस्, हेरचाहको राम्रो अंशमा समाहित गर्नुहोस्।
सिन्टरक्लास राज्यको बच्चाको रूपमा, यदि तपाइँसँग ती सबै ड्र्यागहरू बारे बिभिन्न विचारहरू छन् जुन प्राथमिक स्कूलमा तपाइँको सानो बच्चालाई भन्दछ कि उनीहरू लि gender्ग तटस्थ छन् र अझै पनि उनीहरूको लि choose्ग छनौट गर्न सक्दछन्, त्यसोभए तपाईलाई केहि पुन: शिक्षा आवश्यक पर्दछ। के तपाईं आउँदै हुनुहुन्छ? यो संघर्ष गर्दैन यदि तपाईं संघर्ष छैन।
के तपाईंलाई सिन्टरक्लास पत्रिका र मिथक अखबारका कथाहरू याद आउँछन् जसमा एक भ्रमित व्यक्तिले पूर्व मन्त्री एल्स बोर्स्टको हत्या गरे? केवल केहि लागि! के तपाईं भ्रमित व्यक्तिहरूका कथाहरू सम्झनुहुन्छ जसले सबै प्रकारका हत्या र बलात्कारहरू गर्छन्? त्यो सबै अखबार, मिथक अखबार, मिथक अखबारमा थियो। र यसले वास्तवमा कुन मिथकलाई तपाईं गणना गर्नुहुन्छ भन्दछ। यदि तपाईं सेन्टका विचारहरू बारे अलिक विद्रोही हुनुहुन्छ भने, तपाईं सम्भाव्य रूपमा अलमल्ल हुन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, यसले चोट पुर्‍याउँदैन।
त्यहाँ सबै Fiese आतंककारीहरू छन् जसले सिनर्टेक्लास र उनका सहयोगीहरूलाई धम्की दिन्छन्। Sinterklaas भन्छन् कि उनिहरुलाई पनि धम्की दिन्छ। उनले यो सिन्टरक्लास पत्रिका र मिथक अखबारमा देखाउँछन्। सिन्टरक्लास राज्यले ती आतंककारीहरूको बिरूद्ध तपाइँको सुरक्षा गर्न चाहन्छ र नराम्रो रोक्नको लागि अधिक सहयोगीहरू प्रयोग गर्दछ। कलिलो पोंछ सबै प्रकारका साधनहरू हुन्छन् उनीहरूको समस्यामा रोकथाम गर्नका लागि र यसले गर्दा संतलाई तपाईंको बारेमा सबै कुरा थाहा हुन्छ। त्यो त्यसपछि ठूलो Sinterklaas राज्य पुस्तक मा आउँछ।
ती सबै यी दिनहरू धेरै सहज रूपमा जान्छन्। त्यो भन्दा पहिले, सान्ता क्लजसँग स्पेनमा सबै ठूला डाटा कम्प्युटरहरू छन् जसले तपाईंको घरमा र तपाईंको फोन, पीसी र स्मार्टवाचमा सबै सेन्सरहरू ट्याप गर्छन्। यस तरिकाले सेन्टले देख्न सक्छन् कि वास्तवमा को खतरा हो र कसले झोलामा जान्छ। जो मीठो छ उसले उत्तम चीजहरू पाउँछ, जो शरारती हो त्यो जाल हो। सोट वाइपहरू ठूलो संख्यामा तयार छन् तपाईंलाई समाजबाट मेटाउनको लागि। किनभने सिन्टरक्लासले आफू छोटो छ भन्ने कुराको तथ्य हुँदाहुँदै पनि हामी सडकको प्रायः सबै कुनामा सुंघो सफा वाइपरमा सफा गर्ने पौंटा देख्छौं। र त्यहाँ सहयोगीहरूको टोली पनि हुन्छन् र स्पेनमा सन्तसँग धेरै सहयोगीहरू छन् जो उनीहरूको झोलामा लगिएका बच्चाहरूलाई हुर्काउनका लागि तयार छन्।
Sinterklaasje भर्खर तपाईंको दासको साथ आउँनुहोस्, किनकि हामी सबै सीधा छौं।
एआईभीडीले फेरि आतंकवादी हमला हुनबाट रोकेको छ, एआईभीडी र मिडियाले शो बेच्दै आएको छ
स्मार्ट शहरहरू, डिजिटल जेल तपाईंलाई बुझाउन बिना यो महसुस हुन्छ
ट्याग: भेदभाव, छलफल, विशेष, कालो वाइपर, Sinterklaas, कालो पेक
30 नोभेम्बर 2019 मा 16: 02
Sinterklaas ?! विगतको हो, यो सेन्ट पेडोफिलियस नामको लि gender्ग-तटस्थ ट्रान्सजेंडर सींग काचेज भाइ हो र यसका चित्रित अनुहारहरू र गार्डहरू छन् जसले मदुरोडमलाई आतंकित गर्दछ र जहाँ बच्चाहरूलाई उनीहरूको काखमा बस्न बाध्य तुल्याइएको छ। हो यो मादुरोडम र वरपरका ठाउँहरूमा छिटो डाउनहिलमा गयो
30 नोभेम्बर 2019 मा 16: 23
ठिक छ, यसमा के गलत छ? तपाइँका बच्चाहरूलाई नयाँ इन्द्रेणी समाजमा बन्चित गराउन राम्रो छैन? हामीसँग चाँडै नै लि gender्ग तटस्थहरूको विशाल ज्वारभाटा हुनेछ, ता कि हामी तिनीहरूलाई उत्तम रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छौं।
ती अभिभावकहरूले मेरो पुस्तक पढ्नुपर्दछ ... म निम्न कुरि अधिक विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछु:
गहिरो अध्ययन (साइटमा यहाँ लेखहरूमा) तपाईंलाई सिकाउँछ कि ट्रान्सजेंडरवादले न केवल प्रजनन र शिक्षा दुबैलाई राज्य (ब्राभ न्यू वर्ल्ड, एल्डस हक्सली) तिर बढाउँदछ, तर यो पनि अगाडि पोर्टल हो। transhumanism को लागी। दुबैमा शब्द परिवर्तनको शब्द "ट्रान्स" हुन्छ। लुसिफेरियाको विश्व अर्डरले केवल अमर मानिसका लागि मात्र प्रयास गर्दैन (के तपाईं धर्महरू र उनीहरूको "अनन्त जीवन" लाई चिन्नुहुन्छ?), तर मानिस साइबर बन्नका लागि पनि प्रयास गर्दछ। त्यो केवल सुरूवात हो, किनकि अन्तिम लक्ष्य एकलता हो। त्यो शब्द गुगलका मुख्य प्राविधिक अधिकारी, आविष्कारक, लेखक, र विश्वव्यापी लगानीकर्ता र ट्रान्सह्यूनिज्मका प्रवर्तक द्वारा रेख गरिएको शब्द हो: रे कुर्ज्वेइल। एकलता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (कोर्सको क्लाउडमा) को साथ मानवीय दिमागको फ्यूजन हो।
त्यसोभए यदि तपाइँ यती लिबरल तटस्थतालाई अँगाल्न यति उदार र "दिमागबाट स्वतन्त्र" हुनुहुन्छ र होशियारी वा अचेतन रूपमा प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईं रूढीवादी हुन चाहनुहुन्न र तपाईं जहिले पनि विकासको अग्रणी हुनुहुन्छ भने विचार गर्नुहोस्। यो केवल अन्तिम दासत्वको पोर्टल हो जसमा मस्तिष्क र नानोटेक्नोलॉजिकल रूपले रूपान्तरित निकाय भएका व्यक्तिहरू इन्टरनेटमा आउनु पर्छ (ट्रान्सजेंडर ट्रान्सहुमन)। त्यो प्रक्रिया क्रमिक हो, तर प्रचारले राम्रोसँग पहिले नै यसको काम गरिरहेको छ। ट्रान्सजेंडर / लि neutral्ग तटस्थ सुरुवात हो। अर्को चरणहरू मस्तिष्कको इन्टरनेटको जडान हो (उदाहरणका लागि एलोन मस्कको न्युरेलिंक) र शरीरमा नानोबोट आक्रमण। थप रूपमा, यो धेरै उपयोगी छ यदि सबैको डीएनए विश्वव्यापी डाटाबेसमा छ र खोप कानूनले सुनिश्चित गर्दछ कि सबैले इन्जेक्सन स्वीकार्नु पर्छ। CRISPR-CAS12 विधिमा आधारित आनुवंशिक सम्पादन विधिहरू त्यसपछि क्लाउडबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। राज्यले तपाइँको डीएनए अनलाइन समायोजित गर्न सक्दछ।
यो धेरै बुझ्न सकिन्छ कि तपाई पनि सोच्नु हो कि पुरुष र महिला बराबर छ। यदि तपाइँ लिङ्ग संकटबाट जान्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई बुझ्न यो पनि बुझ्न योग्य छ। यो शायद नै हो कि यो साँच्चै समय हेर्न को लागी यो अब कुनै बुझाइको विषय हो, तर हामी कठिन प्रचारको साथ काम गरिरहेका छौं। र त्यो प्रचार अब हानिकारक हुनेछ यदि तपाईंले देख्नु भएको कुरा के हो भने। हामी वास्तवमा पूर्ण डिजिटल दासत्व तिर हाम्रो आफ्नै कब्र खुल्ला गर्दैछौं।
यदि तपाईंले समस्या लिनुभयो र यसलाई आफैंमा डुबाउनुभयो भने, तपाईंले यो अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ कि यो मेरो परिवार तपाईंको परिवार, साथीहरू वा परिचितहरूसँग साझेदारी गर्न उपयोगी छ।
3 डिसेम्बर 2019 मा 23: 54
साल्मन तपाईको सोचको रेलि त पागल होइन ..
30 नोभेम्बर 2019 मा 16: 31
30 नोभेम्बर 2019 मा 16: 57
यूट्यूबले किन अझै यी भिडियोहरू प्रतिबन्धित गरेको छैन? वा तिनीहरूलाई 'काखो वाइप' को साथ पुन: गाईनु पर्छ।
खैर, म पूर्ण रूपमा Zwarte Piet को उन्मूलनको पक्षमा छु, तर Sinterklaas को झोलामा हुने खतरा हटाउन सकिएन। ओह साथीहरु के के हाकिम ..
जब म प्राइमरी स्कुलमा थिएँ मलाई सिन्टरक्लास र ज्वर्ट पाईट मनपर्दछ। वातावरण, कपडा, पेपरोटेन, आश्चर्यचकित गर्दै, स्कूलमा केवल रमाइलो थियो। जातिय भेदभावको साथ केहि पनि थिएन।
Zwarte Piet को मुद्दा केटाहरूले समाजमा संलग्न हुन प्रयोग गर्छन्। केटाहरूले अन्धकार मान्छेको रक्षा गर्न चिन्तित छैनन्। Zwarte piet सामाजिक ईन्जिनियरिंग को एक उपकरण को रूप मा मात्र एक उदाहरण हो। कुनै अधिक र कुनै पनि कम। फेरि अनुमान गर्नुहोस् ती पृष्ठभूमिमा एन्टि-कालो मानिसहरू पछाडि को छ र अँध्यारो मान्छेहरूको प्रबन्धक / स्पिन डाक्टरको रूपमा विरोध पठाउनुहोस्। हो, पक्कै पनि केटाहरू। यो सम्भव छ कि अन्धकारले यो देख्दैन। जो सबैभन्दा लामो तान्छन् सधैं केटाहरू हुन्छन्। 'कालो पेशाको मुद्दा' पछि केटाहरूले कसलाई केन्द्रित गर्नेछ? तिनीहरू अझै व्यस्त छन् माहुरी, ती राम्रो मान्छे, ती केटाहरू।
30 नोभेम्बर 2019 मा 17: 16
वास्तवमा ती सबै Sinterklaas कर पैसा के हुन्छ? "Ameriko ती सबै जरा खान सक्नुहुन्छ? होइन, भान्साको मान्छेले त्यसबाट स्वादिष्ट गाजर केक बनाउँदछ। ”त्यो केक सेन्टका परिवारका सदस्यहरूलाई जान्छ।
3 डिसेम्बर 2019 मा 11: 43
पिग्मेन्ट खैरो छ! कालिलो कालो ईगो छ त्यहाँ "कालो मानिस" छैनन् र त्यहाँ एक मात्र जात होमो सेपियन्स छ?
5 डिसेम्बर 2019 मा 01: 42
सुन्नुहोस् जो त्यहाँ छन् बच्चाहरूलाई:
"कानून प्रवर्तन कार्यहरूमा क्षमताहरू, विशेष गरी टाढाको निरीक्षण वा सम्भावित खतरनाक वातावरणहरू।"
« फुटबल स्टेडियममा स्मार्ट क्यामेरा चाइनिज पोइन्ट सिस्टम समाज भन्दा पहिले?
रट्टर ब्रैगम्यानले एक फासीवादी संयुक्त राष्ट्र शासनको लागि आह्वान गर्दछ »
कुल भ्रमण: 15.872.469